ओमकार टाइम्स बालबालिका देखि युवामाझ लोकप्रिय अन्लाईन गेम पब्जी खेल्न प्रतिबन्ध हुनसक्छ? – OMKARTIMES
बालबालिका देखि युवामाझ लोकप्रिय अन्लाईन गेम पब्जी खेल्न प्रतिबन्ध हुनसक्छ?
काठमाडौं : दैनिक घन्टौसम्म छोराछोरी मोबाइल ग्याममा रमाउन थालेपछि अभिभावक आजित भएर प्रहरी गुर्हान पुगेका छन्।
बसुन्धरा बस्ने एक महिलाले भनिन्, ‘छोरा भर्खर १२ वर्षको भयो, मोबाइल एक छिन पनि छाड्दैन। राति एकाएक हान्, मार्, मर्‍यो जस्ता आवाजले भर्भराउन थाल्यो। के रहेछ भनेर बुझ्दा पब्जी गेम खेलेर रहेछ। यसलाई हटाउन सकिंदैन ?’पब्जी गेमका सीडीसमेत बजारमा बेच्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनको माग गरिन्।
जवाफमा एसएसपी सिंहले यो गेम बन्द गराउन धेरै अभिभावकले गुनासो गरेकाले बन्द गराउन प्रहरीले प्रक्रिया थालेको बताए।